I-TwinGEO 5th Edition -Imbono yeGeospatial -Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/I-TwinGEO yesi-5 yoHlelo-Imbono yeGeospatial
Kulenyanga sibonisa iTwingeo Magazine kuHlelo lwesi-5, siqhubeka nomxholo ophambili weli "Ingcamango ye-Geospatial", kwaye loo nto ininzi yelaphu ekufuneka lisikiwe malunga nekamva lobuchwephesha be-geospatial kunye nekhonkco phakathi kwezi kwamanye amashishini abalulekileyo. .
Siyaqhubeka nokubuza imibuzo ekhokelela ekucingeni nzulu, Sifuna ukuba ikamva lethu lobuchwephesha be-geospatial libukeke njani?, Ngaba silulungele utshintsho? Ngaba iya kubandakanya amathuba okanye imiceli mngeni? Uninzi lweengcali ezizinikele ngokupheleleyo, kwaye abo babona inguquko yobundlobongela ekubanjweni, ekusetyenzisweni, ekusasazeni idatha ye-geospatial, -kwaye ngoku kungoku ngeli bhubhane sihlala kulo - siyavumelana ngento enye, ikamva namhlanje.
Singatsho ukuba sakha "iJografi entsha", sisebenzisa izixhobo okanye izisombululo zetekhnoloji esinokuthi simodareyithe kwaye sihlalutye okusingqongileyo kwangoko, sinike iimpendulo ezichanekileyo nezichanekileyo ezivela kwisixa esikhulu sedatha.
Kolu hlelo, udliwanondlebe olwaqhutywa nguLaura García -Geographer kunye neGeomatics Specialist, neenkokheli kwicandelo leGeospatial. Omnye wabo banyuliweyo yayinguCarlos Quintanilla, umongameli wangoku woMbutho weQGIS, othetha ngokuvela kwetekhnoloji yokusetyenziswa simahla, kunye nokubaluleka kwedatha evulekileyo njengeOpenStreetMap.
Ithemba lekamva le-GIT yasimahla liyakhula kwaye kuya kusiba nzima ukuthethelela ukusetyenziswa kwezixhobo zorhwebo, oku kuyakukhulisa icandelo le-GIT yasimahla. UCarlos Quintanilla.
Ukusukela oko kwaqala kwesoftware yasimahla njengesixhobo solawulo lwedatha yendawo, kuye kwenziwa idabi phakathi kwabasebenzisi kunye nabenzi bezisombululo zomhlaba ezihlawulelweyo. Eli dabi alinakuze liphele, kodwa umbuzo ngulo, Ngaba izixhobo zasimahla ziya kuqhubeka zizinzile ekuhambeni kwexesha? Ingaphezulu kweminyaka engama-20 idlulile kwaye siyibonile indaleko enzulu.
Ukunyuka kwetekhnoloji yolwazi yasimahla ye-TIG kuyabonakala xa besenza iminxeba kwaye inani elikhulu labantu liphuma ngenxa yokufuna ukwazi okanye njengabaphandi abaza kubonisa inkqubela phambili kuluntu lwe-GIS, babheje yonke into ukuba negalelo ekukhuleni kwayo. Iinkampani ezinkulu kwicandelo le-geospatial, kwicala labo, ziyaqhubeka ukuveza ukuba izixhobo zabo zokuhlawula zinokubaluleka, kodwa ekupheleni kwendlela, ziziphumo kuphela ezinokubaluleka kunye nendlela umhlalutyi anokuzicacisa ngayo ukuze enze izigqibo ezifanelekileyo.
Ithemba lekamva le-GIT yasimahla liyakhula kwaye kuya kusiba nzima ukuthethelela ukusetyenziswa kwezixhobo zorhwebo, oku kuyakukhulisa icandelo le-GIT yasimahla. UCarlos Quintanilla umfanekiso obambe indawo
Kanye nezixhobo zohlalutyo lomhlaba, amathuba andisiwe okuqeqeshwa kweengcali kunye neengcali kulawulo lolwazi olungcono kunye nokuqondwa okungcono kwendawo. Ngexesha lobhubhane-ngakumbi- ukunikezelwa kumaqonga okufundisa ngomnxeba kunyukile, kungekuphela kuqeqesho oluthe ngqo, kodwa nakumanqanaba aphezulu emfundo, ubungcali, iiMasters kunye noGqirha
Kule 2020, iYunivesithi yasePolytechnic yaseValencia yavula ubhaliso lwayo INkosi kwiiGeometri zoMthetho, iprojekthi enomdla yeYunivesithi yasePolytechnic yaseValencia, kwaye ikhuthazwe siSikolo soBugcisa esiPhakamileyo seGeodetic, Cartographic kunye neTopographic Engineering. UGqirha Natalia Garrido Villén, umlawuli we-Master kunye nelungu leSebe leCartographic Engineering, iGeodesy kunye nePhotoogrammetry yeYunivesithi yasePolytechnic yaseValencia. Usixelela iziseko ze-Master, amahlakani athabathe inxaxheba kule projekthi, kunye nezizathu zokuba ziyilwe.
I-geometry esemthethweni sisixhobo sokufumana, ukuqhubekeka, ukuqhubekeka kunye nokuqinisekisa idatha yomzimba kunye neyomthetho. Natalia Garrido.
Ukungeniswa kweli gama "iJometri yezomthetho" kunomdla, ke safumanisa omnye wabameli bale Master ukucacisa amathandabuzo aza nenkcazo yawo, kuba kwimbali kuye kwagqitywa ukuba irejista yepropathi Ukuthengiswa kwezindlu sesona sixhobo sisebenzayo kulawulo lomhlaba, enkosi kuwo amawaka eedatha yendawo kunye neyomzimba enxulumene nomhlaba.
Kwelinye icala, sinegalelo likaGerson Beltrán, uGeographer- PhD, onamava abanzi kuphando nasekufundiseni abanye ngolwazi njengotitshala. NgeBeltrán sikwazile ukulungisa imeko yendawo ukusuka kwisiseko, Wenza ntoni ummi welizwe? Ngaba ikhawulelwe kuphela ekwenziweni kweemaphu? Usixelele nangeprojekthi yakhe Dlala kwaye uye kumava kunye nezicwangciso zakho zexesha elizayo.
Amashishini e-geospatial adibanisa onke amacandelo oqeqesho kwihlabathi liphela. Ukuba kukho isixhobo esivumela ngoku ulawulo lwezixeko ezifanelekileyo, ngaphandle kwamathandabuzo, yi-GIS. UGerson Beltran
Ukongeza, kumaphepha e-Twingeo uphando olunomdla malunga nenqaku lamafu lwapapashwa, lubhalwe nguJesús Baldó ovela kwiDyunivesithi yaseVigo, ekufanele ukuyifunda, kunye neendaba, ukusebenzisana, kunye nezixhobo zeenkokheli ebaleni. ubume bomhlaba:
I-AUTODESK iveza "Igumbi Elikhulu" kwiingcali zokwakha
IINKQUBO ZENKQUBO Yazisa ngokusondeza ukunikela ngasesidlangalaleni.
I-China ukuseka iziko lolwazi lwe-geospatial
I-ESRI kunye ne-AFROCHAMPION zisungula umanyano lokwazisa nge-GIS e-Afrika
I-ESRI isayina imemorandam yokuqonda kunye ne-UN-Habitat
I-NSGIC Yazisa Amalungu Amatsha EBhodi
I-TRIMBLE ibhengeza ukudityaniswa okutsha neMicrosoft 365 kunye neBIMcollab
Kufuneka sikhankanye inqaku eliphambili lomagazini ngumhleli weGeofumadas Golgi valvarez, ubala ubuchwephesha obusetyenziswe kumgca wexesha elidlulileyo ukusuka kwiminyaka engama-30 ngaphambi kweli xesha, xa itekhnoloji ibingekude ukuba yintoni namhlanje, Kananjalo nokuphakamisa imibuzo malunga neminyaka engama-30 ezayo.
Isazi sejografi, isazi sejografi, umvavanyi, injineli, umyili wezakhiwo, umakhi kunye nomsebenzisi kufuneka babonise ulwazi lwabo lobuchwephesha kwindawo efanayo yedijithali, apho umhlaba ongaphantsi kunye nomxholo womhlaba, uyilo lwevoluyum generic kunye neenkcukacha zeziseko zibalulekile. , ikhowudi engemva kwe-ETL njengonxibelelwano olucocekileyo lomsebenzisi ophetheyo. UGolgi Alvarez.
Kwicandelo lakhe, sikwanaye noMlawuli wePaul Synnott we-ESRI Ireland, kwinqaku lakhe elithi "I-Geospatial: imfuneko kulawulo lwezinto ezingaziwayo", uphakamisa ukubaluleka Ubukrelekrele bendawo, kunye nolwazi ekusebenziseni izixhobo ze-geotechnology zinokutshintsha kakhulu izigqibo kwaye zinike iimpendulo ezichanekileyo kwiimeko zongxamiseko.
Indawo, indawo, kunye nejografi, ngohlobo lwedatha yendawo, itekhnoloji ye-GIS, kunye nobuchwephesha be-geospatial yenye yezo zinto zixhasa ulwakhiwo, ukusetyenziswa kwalo kusivumela ukuba sicwangcise ezona 'ndawo zingaziwayo zingaziwayo', zisivumele ukuba siqonde iingxaki ezinokubakho phambi kokuba babe yimeko ezingxamisekileyo. UPaul Synnott-uEsri Ireland
Iinkcukacha ezithe xaxe?
I-Twingeo isesandleni sakho ukuze ufumane amanqaku anxulumene ne-Geoengineering kuhlelo lwayo olulandelayo, nxibelelana nathi nge-imeyile editor@geofumadas.com y edit@geoingenieria.com. Okwangoku iphephancwadi lipapashwe kwifomathi yedijithali- ukuba ifunwa ngohlobo lomzimba kwimisitho, inokucelwa phantsi kwenkonzo ukushicilelwa nokuthunyelwa kwemfuno, okanye ngokunxibelelana nathi ngeimeyile ebezibonelelwe ngaphambili.
Ukujonga iphephancwadi nqakraza -apha-kwakhona apha ngezantsi ungayifunda ngohlobo lwayo lwesiNgesi. Yintoni elindele ukukhuphela iTwingeo? Silandele LinkedIn uhlaziyo oluninzi.